Premium – Quality – Alpha Premium
The Dragon Tomb – Ancient Legend (2021) ##unicode The Dragon Tomb Ancient Legendဇာတ်ကားမှာတော့ Yuan Zhenဟာ မိဘမဲ့ကလေးလေးယောက်ကို မွေးစားကာ သချိုင်းတူးဖော်တဲ့ပညာတွေသင်ပေးခဲ့တယ်။ အဲ့တပည့်လေးယောက်ထဲက အကြီးဆုံးတပည့်ဖြစ်သူ Lu Jin Zhouဟာ သချိုင်းဂူတူးဖော်တဲ့ အလုပ်ကနေ အနားယူလိုက်ပေမဲ့ တစ်နေ့မှာ သူ့ရဲ့ဆရာတူညီအကိုအမ သုံးယောက်က သူ့ဆီရောက်လာပြီးတော့ သူတို့ဆရာ Yaun Zhenဟာ Dragon Tombကိုသွားရှာရင်းပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အကြောင်း လာပြောခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဖြစ်သူကို ရှာဖွေဖို့ တပည့်လေးယောက် Dragon Tombကို ခရီးထွက်လာရင်း လမ်းတစ်ဝက်မှာဓားပြတိုက်ခံရကာ Dragon Tombရဲ့ ‌မြေပုံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဟာ ဓားပြတွေဆီပါသွားခဲ့တယ်။ဓားပြတွေက Dragon Tombထဲ ရတနာတွေကိုတပ်မက်ပြီး Lu Jin Zhouတို့လေးယောက်ကို ဖမ်းကာ Dragon Tombဆီလမ်းပြခိုင်းခဲ့တယ်။ အန္တရာယ်များတဲ့ Dragon Tombဆီကို ဓားပြတွေနဲ့အတူသွားရမဲ့ Lu Jin Zhouတို့ သူတို့ဆရာကို ဘေးကင်းကင်းနဲ့ရှာတွေ့ပါ့မလားဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး ##zawgyi The Dragon Tomb Ancient Legendဇာတ္ကားမွာေတာ့ Yuan Zhenဟာ မိဘမဲ့ကေလးေလးေယာက္ကို ေမြးစားကာ သခ်ိဳင္းတူးေဖာ္တဲ့ပညာေတြသင္ေပးခဲ့တယ္။ အဲ့တပည့္ေလးေယာက္ထဲက အႀကီးဆုံးတပည့္ျဖစ္သူ Lu Jin ...
IMDB: 8.6/10 2457 votes
The Dragon Tomb – Ancient Legend (2021)
Gintama: The Final (2021) ##unicode ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Gintama The Finalဆိုတဲ့ဂျပန် anime ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် anime ပရိသတ်တွေကြားနာမည်ကြီးလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ Gintama anime series ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်ပါတယ် ဒီအပိုင်းမှာတော့ ဂြိုဟ်သားတွေဟာ ထာဝရရှင်သန်နိုင်ဖို့ကမ္ဘာမြေရဲ့စွမ်းအင် အယ်တာနာကိုစုပ်ယူဖို့ရောက်လာတဲ့အခါ အယ်ဒိုမြို့ဟာနောက်တစ်ကြိမ်ဒုက္ခတွင်းထဲကိုကျရောက်ပြန်ပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့်ကာဂူရာ ရှင်ပါချီနဲ့ မြို့ထဲကလူတွေအားလုံးတိုက်ပွဲထဲကိုဝင်ရပါတော့တယ် တစ်ဖက်မှာတော့ ဂင်တိုကီ ကတ်ဆူရာနဲ့ တာကာဆူဂီတို့ဟာဂြိုဟ်သားယာဉ်ပျက်ကျလာတဲ့တာဝါထဲကိုဝင်ပြီး တိုက်ခိုက်နေပါပြီ ဂြိုဟ်သားတွေကိုအဆုံးမှာတိုက်ထုတ်ပြီးအယ်ဒိုမြို့လေးကိုကာကွယ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့်ကားလေးပါ Action Comedy အမျိုးအစားဖြစ်လို ့ရယ်လည်းရယ်ရမယ့်အပြင် အက်ရှင်အလန်းစားတွေလည်းကြည့်ရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်လို့ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ခါတင္ဆက္ေပးမွာကေတာ့ Gintama The Finalဆိုတဲ့ဂ်ပန္ anime ကားေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ anime ပရိသတ္ေတြၾကားနာမည္ႀကီးလူႀကိဳက္မ်ားခဲ့တဲ့ Gintama anime series ရဲ႕ေနာက္ဆုံးပိုင္းျဖစ္ပါတယ္ ဒီအပိုင္းမွာေတာ့ ၿဂိဳဟ္သားေတြဟာ ထာဝရရွင္သန္ႏိုင္ဖို႔ကမာၻေျမရဲ႕စြမ္းအင္ အယ္တာနာကိုစုပ္ယူဖို႔ေရာက္လာတဲ့အခါ အယ္ဒိုၿမိဳ႕ဟာေနာက္တစ္ႀကိမ္ဒုကၡတြင္းထဲကိုက်ေရာက္ျပန္ပါတယ္ အဲ့ဒါေၾကာင့္ကာဂူရာ ရွင္ပါခ်ီနဲ႔ ၿမိဳ႕ထဲကလူေတြအားလုံးတိုက္ပြဲထဲကိုဝင္ရပါေတာ့တယ္ တစ္ဖက္မွာေတာ့ ဂင္တိုကီ ကတ္ဆူရာနဲ႔ တာကာဆူဂီတို႔ဟာၿဂိဳဟ္သားယာဥ္ပ်က္က်လာတဲ့တာဝါထဲကိုဝင္ၿပီး တိုက္ခိုက္ေနပါၿပီ ၿဂိဳဟ္သားေတြကိုအဆုံးမွာတိုက္ထုတ္ၿပီးအယ္ဒိုၿမိဳ႕ေလးကိုကာကြယ္ႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမယ့္ကားေလးပါ Action Comedy အမ်ိဳးအစားျဖစ္လို ႔ရယ္လည္းရယ္ရမယ့္အျပင္ အက္ရွင္အလန္းစားေတြလည္းၾကည့္ရမယ့္ ဇာတ္ကားေကာင္းေလးျဖစ္လို႔ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Genre : Action,Aventure,Animation Subtitle : ...
IMDB: 9.3/10 676 votes
Jim Button and the Wild 13 (2020) ##(app member only) ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Jim Button and the Wild ဆိုတဲ့ဂျာမန်ကားလေးကိုရွေးချယ်ထားပါတယ် ပထမဆုံးကားက၂၀၁၈ခုနှစ်လောက်တုန်းကထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ ဒီကားလေးကဒုတိယကားဖြစ်ပါတယ် နာမည်ကြီးဂျာမန်စာရေးဆရာ Michael Ende ရေးသားထားတာဖြစ်ပြီးတော့ German Young Literature ဆုကိုလည်းရရှိထားတဲ့အပြင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ဘာသာပေါင်း ၄၀ ကျော်လောက်အထိဘာသာပြန်ဆိုထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ် ဒီအပိုင်းမှာတော့ ဓားကို ၁၃ ယောက်ဟာဂျင်မ်နဲ့ လူးကပ်စ်တို့ ရွှေရောင်နဂါးကြီးမစ္စဆာလာဖန်ကိုခိုးသွားတာကိုသိသွားပြီး သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်စားချေချင်နေပါတယ် တစ်ဖက်မှာလည်း ဂျင်မ်တစ်ယောက်သူ့ရဲ့မိဘအရင်းတွေကိုသိချင်နေပြီး လူးကပ်စ်ရဲ့စက်ခေါင်းတွေနဲ့အတူစွန့်စားခန်းဖွင့်ချင်နေပါတယ် တစ်နေ့သူတို့တိုင်းပြည်မှာမြူတွေထူထဲတဲ့အချိန် သင်္ဘောမှောက်တဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့လူးကပ်စ်နဲ့ဂျင်မ်တို့ကိုဘုရင်ကြီးကတာဝန်ပေးလိုက်ပါတော့တယ် လူးကပ်စ်နဲ့ဂျင်မ်တို့ ဘယ်လိုစွန့်စားခန်းတွေဖွင့်ကြမလဲ ဓားပြတွေရန်ကကောလွတ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size – 2GB Format…mp4 Quality : 1080p Blu-ray Genre : Action,Aventure,Family Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow =========================================================================================== App member only ဖြစ်လို့ app ထဲကနေအကောင့်နဲ့ ဝင်ကြည့်မှရပါမယ်။(app acc အတွက်မန်ဘာဝင်ထားပြီးသူများ viber – ...
IMDB: 6.4/10 257 votes
Space Jam (1996) ##unicode အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ ၁၉၉၆ ခုနှစ်လောက်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့Space Jam 1 ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကားကလည်းအရမ်းကိုနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ကားလေးပါ ဝင်ငွေ သန်း ၈၀ အထိရရှိခဲ့တဲ့အပြင် Box office မှာလည်း ၂၅၀.၂ သန်းအထိရရှိအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ် ဘတ်စကက်ဘောလောကနာမည်ကျော်မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ မိုက်ကန်ဂျော်ဒန်ဟာ ဘတ်စကက်ဘောလောကကနေအနားယူပြီးတဲ့နောက်မှာ Looney Tunes ကမ္ဘာကိုပြန်ပေးဆွဲခံလိုက်ရပါတယ် အကြောင်းကတော့ ဂြိုဟ်သားတွေ Looney Tunes ကမ္ဘာပေါ်ကိုကျူးကျော်လာပြီး ဘက်စ်ဘန်နီနဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်ပြုဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အတွက်ပါ ကျွန်ပြုတာကိုရှောင်လွှဲဖို့အတွက်ဆိုရင် ဘတ်စကက်ဘောပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရရမှာပါ ဒါကြောင့်ဘက်စ်ဘန်နီက မိုက်ကန်ဂျော်ဒန်ကို ပြန်ပေးဆွဲလာခဲ့တာပါ အဲ့တော့မိုက်ကန်ဂျော်ဒန်တစ်ယောက်သူ့ရဲ့စွမ်းရည်တွေနဲ့ Looney Tunes တွေကိုကယ်တင်နိုင်ပါ့မလား ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရဦးမလဲဆိုတာကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi အခုတစ္ေခါက္မွာေတာ့ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ေလာက္ကထြက္ရွိခဲ့တဲ့Space Jam 1 ကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဒီကားကလည္းအရမ္းကိုနာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ကားေလးပါ ဝင္ေငြ သန္း ၈၀ အထိရရွိခဲ့တဲ့အျပင္ Box office မွာလည္း ၂၅၀.၂ သန္းအထိရရွိေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ကားေလးျဖစ္ပါတယ္ ဘတ္စကက္ေဘာေလာကနာမည္ေက်ာ္မိုက္ကယ္ေဂ်ာ္ဒန္ကိုယ္တိုင္ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ မိုက္ကန္ေဂ်ာ္ဒန္ဟာ ဘတ္စကက္ေဘာေလာကကေနအနားယူၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ Looney Tunes ကမာၻကိုျပန္ေပးဆြဲခံလိုက္ရပါတယ္ အေၾကာင္းကေတာ့ ၿဂိဳဟ္သားေတြ Looney Tunes ကမာၻေပၚကိုက်ဴးေက်ာ္လာၿပီး ဘက္စ္ဘန္နီနဲ႔သူငယ္ခ်င္းေတြကိုကြၽန္ျပဳဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့အတြက္ပါ ကြၽန္ျပဳတာကိုေရွာင္လႊဲဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ဘတ္စကက္ေဘာၿပိဳင္ပြဲမွာအႏိုင္ရရမွာပါ ဒါေၾကာင့္ဘက္စ္ဘန္နီက မိုက္ကန္ေဂ်ာ္ဒန္ကို ျပန္ေပးဆြဲလာခဲ့တာပါ အဲ့ေတာ့မိုက္ကန္ေဂ်ာ္ဒန္တစ္ေယာက္သူ႔ရဲ႕စြမ္းရည္ေတြနဲ႔ Looney Tunes ေတြကိုကယ္တင္ႏိုင္ပါ့မလား ဘယ္လိုအခက္အခဲေတြရင္ဆိုင္ရဦးမလဲဆိုတာကို ...
IMDB: 6.4/10 170,014 votes
Future Cops (1993) ##unicode ဒီတစ်ခါမှာတော့ Street Fighter ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးဗီဒီယိုဂိမ်းကို အနည်းအကျဉ်းအခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ Action,Comedy ကားတစ်ကားကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဟောင်ကောင်ရဲ့နာမည်ကြီးမင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ Andy Lau,Jacky Cheung,Aaron Kwok,Chingmy Yau,Dicky Cheung Simon Yam,Ekin Cheng တို့အပြင် ထိုခေတ်အခါကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မင်းသမီးChingmy Yau တို့လည်းပါဝင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ၂၀၄၃ ခုနှစ်မှာလူဆိုးဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကိုဖမ်းမိပြီး တရားစီရင်ချက်ချဖို့ကြိုးစားနေတုန်းမှာပဲ နောက်လိုက်လူဆိုးတပည့်တွေဟာသူတို့ခေါင်းဆောင်ကို ကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်လုပ်ကြပါတယ် သူတို့အကြံအစည်ကစီရင်ချက်ချမယ့်တရားသူကြီးယွီထီဟုန်ရဲ့ ၂၈ နှစ်အရွယ်အတိတ်ကိုသွားပြီး အသိဉာဏ်တွေချို့ယွင်းအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ဒါကိုတားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်အနာဂတ်ရဲတွေဟာလည်း အတိတ်ကိုအချိန်ခရီးသွားပြီးတရားသူကြီးယွီထီဟုန်ကိုရှာဖွေပြီးကယ်ဆယ်ဖို့လုပ်ရပါတော့တယ် လူဆိုးတွေနဲ့အနာဂတ်ရဲတွေဘယ်သူတွေကအရင်တရားသူကြီးကိုအရင်ရှာတွေ့သွားမလဲ လူဆိုးတွေရဲ့အကြံအစည်ကိုရော တားဆီးနိုင်မှာလားဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ Street Fighter ဆိုတဲ့နာမည္ႀကီးဗီဒီယိုဂိမ္းကို အနည္းအက်ဥ္းအေျခခံၿပီး ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ Action,Comedy ကားတစ္ကားကိုမိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္ရဲ႕နာမည္ႀကီးမင္းသားေတြျဖစ္တဲ့ Andy Lau,Jacky Cheung,Aaron Kwok,Chingmy Yau,Dicky Cheung Simon Yam,Ekin Cheng တို႔အျပင္ ထိုေခတ္အခါကနာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့မင္းသမီးChingmy Yau တို႔လည္းပါဝင္ထားပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ၂၀၄၃ ခုႏွစ္မွာလူဆိုးဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကိုဖမ္းမိၿပီး တရားစီရင္ခ်က္ခ်ဖို႔ႀကိဳးစားေနတုန္းမွာပဲ ေနာက္လိုက္လူဆိုးတပည့္ေတြဟာသူတို႔ေခါင္းေဆာင္ကို ကယ္တင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္လုပ္ၾကပါတယ္ သူတို႔အႀကံအစည္ကစီရင္ခ်က္ခ်မယ့္တရားသူႀကီးယြီထီဟုန္ရဲ႕ ၂၈ ႏွစ္အ႐ြယ္အတိတ္ကိုသြားၿပီး အသ္ိဉာဏ္ေတြခ်ိဳ႕ယြင္းေအာင္လုပ္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္ ဒါကိုတားဆီးႏိုင္ဖို႔အတြက္အနာဂတ္ရဲေတြဟာလည္း အတိတ္ကိုအခ်ိန္ခရီးသြားၿပီးတရားသူႀကီးယြီထီဟုန္ကိုရွာေဖြၿပီးကယ္ဆယ္ဖို႔လုပ္ရပါေတာ့တယ္ လူဆိုးေတြနဲ႔အနာဂတ္ရဲေတြဘယ္သူေတြကအရင္တရားသူႀကီးကိုအရင္ရွာေတြ႕သြားမလဲ လူဆိုးေတြရဲ႕အႀကံအစည္ကိုေရာ တားဆီးႏိုင္မွာလားဆိုတာကိုေတာ့ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 2GB,1GB Format…mp4 Quality : ...
The Rebels of PT-218 (2021) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့ ဂျာမန်တွေကြားက စစ်ပွဲတစ်ခုအကြောင်းကို အခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကားလေးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကားထဲမှာဆိုရင် ၁၉၄၂ ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကစစ်ပွဲသမိုင်းကြောင်းတွေကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှု ရမှာဖြစ်ပါတယ် S.S Lawton B Evans ဟာတိုက်သင်္ဘောမဟုတ်ဘဲလိုအပ်တဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ရိက္ခာတွေပို့ရတဲ့ ထောက်ပံ့ရေးသင်္ဘောတစ်စင်းပါ အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်မဟာမိတ်တပ်တွေဟာ နာဇီအင်ပါယာရဲ့အားနည်းတဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့အီတလီဆလာနိုကမ်းခြေကိုခြေကုပ်ယူဖို့ကြိုးစားပါတယ် ဒါပေမယ့်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအမြှောက်ကြီးတွေကြောင့်စစ်တပ်တွေဝင်မရဘဲအမြဲရှုံးနိမ့်နေရပါတယ် အဲ့လိုနဲ့ပဲ S.S Lawton B Evans သင်္ဘောကြီးဟာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပို့ဖို့သွားရင်း သူတို့ဘက်ကသင်္ဘောတစ်စင်းပစ်ချခံလိုက်ရတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာ ကူညီဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် နောက်ကျသွားပါတယ်မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေပြီဖြစ်တဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဟာ ကမ်းခြေကိုတပ်ကူတွေမရောက်နိုင်ခင်မှာအနီးဆုံးရှိနေတဲ့ S.S Lawton B Evans သင်္ဘောသားတွေကိုကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ အမြှောက်ကြီးတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့အမိန့်ပေးပါတော့တယ် ရိက္ခာပို့ဖို့အတွက်ပဲလေ့ကျင့်ထားပြီးစစ်ပွဲအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သင်္ဘောသားတွေခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ရပုံတွေကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရိုက်ကူးပြထားတဲ့ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းကျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့အေမရိကန္နဲ႔ ဂ်ာမန္ေတြၾကားက စစ္ပြဲတစ္ခုအေၾကာင္းကို အေျခခံၿပီး႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ျဖစ္ရပ္မွန္ကားေလးတစ္ကားကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဒီကားထဲမွာဆိုရင္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္ကစစ္ပြဲသမိုင္းေၾကာင္းေတြကိုအေသးစိတ္ၾကည့္ရႈ ရမွာျဖစ္ပါတယ္ S.S Lawton B Evans ဟာတိုက္သေဘၤာမဟုတ္ဘဲလိုအပ္တဲ့စစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြနဲ႔ရိကၡာေတြပို႔ရတဲ့ ေထာက္ပံ့ေရးသေဘၤာတစ္စင္းပါ အေမရိကန္နဲ႔ၿဗိတိန္မဟာမိတ္တပ္ေတြဟာ နာဇီအင္ပါယာရဲ႕အားနည္းတဲ့အပိုင္းျဖစ္တဲ့အီတလီဆလာႏိုကမ္းေျခကိုေျခကုပ္ယူဖို႔ႀကိဳးစားပါတယ္ ဒါေပမယ့္ကမ္းေျခမွာရွိတဲ့တိုက္ခိုက္ေရးအေျမႇာက္ႀကီးေတြေၾကာင့္စစ္တပ္ေတြဝင္မရဘဲအၿမဲရႈံးနိမ့္ေနရပါတယ္ အဲ့လိုနဲ႔ပဲ S.S Lawton B Evans သေဘၤာႀကီးဟာေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းေတြပို႔ဖို႔သြားရင္း သူတို႔ဘက္ကသေဘၤာတစ္စင္းပစ္ခ်ခံလိုက္ရတာကိုေတြ႕လိုက္ရတဲ့အခါမွာ ကူညီဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္က်သြားပါတယ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနၿပီျဖစ္တဲ့မဟာမိတ္တပ္ေတြဟာ ကမ္းေျခကိုတပ္ကူေတြမေရာက္ႏိုင္ခင္မွာအနီးဆုံးရွိေနတဲ့ S.S Lawton B Evans သေဘၤာသားေတြကိုကမ္းေျခမွာရွိတဲ့ အေျမႇာက္ႀကီးေတြကိုဖ်က္ဆီးဖို႔အမိန္႔ေပးပါေတာ့တယ္ ရိကၡာပို႔ဖို႔အတြက္ပဲေလ့က်င့္ထားၿပီးစစ္ပြဲအေတြ႕အႀကဳံမရွိတဲ့သေဘၤာသားေတြခက္ခက္ခဲခဲနဲ႔ ရန္သူကိုတိုက္ခိုက္ရပုံေတြကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္႐ိုက္ကူးျပထားတဲ့ကားေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ Review – Phyu Sin File Size – 2GB,1GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p ...
The Gossip (2021) ##unicode The gossip(2021)ဒီကားလေးကတော့ Thriller,Mystery,Horror,Comedy ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပြီး rating 8 အထိရရှိထားပါတယ် Cast SF9 ထဲက Chani အပြင် Kim Kang Hyu,Kim So Ra တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ဂျောင်ဆော့က အချိန်ပိုင်းလုပ်ခများလို့ အလုပ်လုပ်ဖို့ အိမ်တစ်အိမ်ရောက်သွားပါတယ် အဲ့အိမ်မှာလူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီး ကောလဟာလတွေပြောပြပါတော့တယ် အဲ့ကောလဟာလအတိုင်း တကယ့်လူသတ်မှုဖြစ်ပြီး ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားကြပါတော့မယ် အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီး ဟာသရောပါလို့ စိတ်ဝင်စားစရာကြည့်ရှုရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi The gossip(2021)ဒီကားေလးကေတာ့ Thriller,Mystery,Horror,Comedy ဇာတ္ကားေလးျဖစ္ၿပီး rating 8 အထိရ႐ွိထားပါတယ္ Cast SF9 ထဲက Chani အျပင္ Kim Kang Hyu,Kim So Ra တို႔ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းေလးကေတာ့ ေဂ်ာင္ေဆာ့က အခ်ိန္ပိုင္းလုပ္ခမ်ားလို႔ အလုပ္လုပ္ဖို႔ အိမ္တစ္အိမ္ေရာက္သြားပါတယ္ အဲ့အိမ္မွာလူတစ္ေယာက္နဲ႔ေတြ႔ၿပီး ေကာလဟာလေတြေျပာျပပါေတာ့တယ္ အဲ့ေကာလဟာလအတိုင္း တကယ့္လူသတ္မႈျဖစ္ၿပီး ဖံုးကြယ္ဖို႔ႀကိဳးစားၾကပါေတာ့မယ္ အရမ္းစိတ္လႈပ္႐ွားစရာေကာင္းၿပီး ဟာသေရာပါလို႔ စိတ္ဝင္စားစရာၾကည့္႐ႈရမယ့္ ဇာတ္ကားေကာင္းတစ္ကားျဖစ္ပါတယ္ Review – Myint Thuzar Lin File Size – 2GB,1GB Format…mp4 Quality ...
Granny’s Got Talent (2015) ##unicode Granny's Got Talentဇာတ်ကားမှာတော့ ကိုရီးယားနာမည်ကြီးမင်းသမီး Kim Soo miပါဝင်တဲ့ Dramaကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Lee Jong Sooဟာ သားနှစ်ယောက်ရှိတဲ့ အသက်၈၅နှစ်အရွယ် ထောင်ထွက်တစ်ယောက်ပါ။ သူ့သားငယ်နဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိပေမဲ့ ငယ်ငယ်က မိဘမဲ့ဂေဟာမှာ ပစ်ထားမိတဲ့ သားကြီးဖြစ်သူကို လိုက်ရှာနေသူပေါ့။ သားကြီးကို ရှာတွေ့သွားပြီးတော့ သားဖြစ်သူကိုတွေ့ချင် သူ့သားကြီး အိမ်မှာ အိမ်ဖော်အဖြစ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ ထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်က သူဆဲနေသံကိုကြားသွားပြီးတော့သူ့ကိုအဆဲပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့လာရောက်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ ဆုကြေးငွေရမှာမို့ သားငယ်ဖြစ်သူရဲ့ တိုက်တွန်းမှုကြောင့် Lee Jong Sooတစ်ယောက် အဆဲပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဆဲဆိုမှုတွေနဲ့ အဖွားကြီးအရွယ် Lee Jong Sooတစ်ယောက် ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရပါ့မလား သားကြီးဖြစ်သူနဲ့ရော တွေ့ဆုံခွင့်ရပါ့မလားဆိုတာ ကြည့်ရှူကြပါအုံး။ ဒီကားလေးက ဟာသရော မိခင်နဲ့သားကြားက မေတ္တာတရားကိုပါ ရိုက်ကူးပြသထားတဲ့ကားလေးမို့အားပေးကြပါအုံး...... ##zawgyi Granny's Got Talentဇာတ္ကားမွာေတာ့ ကိုရီးယားနာမည္ႀကီးမင္းသမီး Kim Soo miပါ၀င္တဲ့ Dramaကားတစ္ကားျဖစ္ပါတယ္။ Lee Jong Sooဟာ သားႏွစ္ေယာက္ရွိတဲ့ အသက္၈၅ႏွစ္အ႐ြယ္ ေထာင္ထြက္တစ္ေယာက္ပါ။ သူ႔သားငယ္နဲ႔ အဆက္အသြယ္ရွိေပမဲ့ ငယ္ငယ္က မိဘမဲ့ေဂဟာမွာ ပစ္ထားမိတဲ့ သားႀကီးျဖစ္သူကို ...
Only (2019) ##unicode ဒီတစ်ခါမှာတော့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်လောက်တုန်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့"Only" ဆိုတဲ့ Sci-Fic ကားလေးကို ရွေးချယ်ထားပါတယ် ဒီကားလေးထဲမှာတော့ အယ်ဗာနဲ့ ဝီလ်ဟာ သိပ်ချစ်ကြတဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ပါတယ် တစ်ရက်မှာတော့ကောင်းကင်ကနေနှင်းလိုလို ပြာမှုန့်လိုလို အရာတွေကျလာပါတော့တယ် အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ ထိတွေ့တဲ့သူတိုင်း အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေမှာ ထူးဆန်းတဲ့ရောဂါပိုးတစ်မျိုးကိုခံစားရပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ သေဆုံးသွားကြပါတော့တယ် ပိုပြီးထူးဆန်းတာက ရောဂါပိုးဟာအမျိုးသားတွေဆီကိုကူးစက်ပေမယ့် သေစေနိုင်လောက်တဲ့အထိရောဂါလက္ခဏာမပြတာပါ ဒါကြောင့်ဝီလ်ဟာ သူ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့အယ်ဗာကိုရောဂါမကူးအောင် နှစ်ယောက်လုံးလည်းအသက်ရှင်ကျန်ရစ်နိုင်အောင် စနစ်တကျစီမံပြီး နေထိုင်ပါတော့တယ် ဝီလ်တို့ချစ်သူနှစ်ယောက်အဆုံးထိဘေးကင်းကင်းနဲ့ရှင်သန်သွားနိုင်ပါ့မလား ဒီရောဂါဆိုးကြီးကိုရော ပျောက်ကင်းအောင်ကုသသွားနိုင်မလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ေလာက္တုန္းကထြက္ရွိခဲ့တဲ့"Only" ဆိုတဲ့ Sci-Fic ကားေလးကို ေ႐ြးခ်ယ္ထားပါတယ္ ဒီကားေလးထဲမွာေတာ့ အယ္ဗာနဲ႔ ဝီလ္ဟာ သိပ္ခ်စ္ၾကတဲ့ခ်စ္သူေတြျဖစ္ပါတယ္ တစ္ရက္မွာေတာ့ေကာင္းကင္ကေနႏွင္းလိုလို ျပာမႈန႔္လိုလို အရာေတြက်လာပါေတာ့တယ္ အဲ့ဒီအရာေတြနဲ႔ ထိေတြ႕တဲ့သူတိုင္း အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ထူးဆန္းတဲ့ေရာဂါပိုးတစ္မ်ိဳးကိုခံစားရၿပီး ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ေသဆုံးသြားၾကပါေတာ့တယ္ ပိုၿပီးထူးဆန္းတာက ေရာဂါပိုးဟာအမ်ိဳးသားေတြဆီကိုကူးစက္ေပမယ့္ ေသေစႏိုင္ေလာက္တဲ့အထိေရာဂါလကၡဏာမျပတာပါ ဒါေၾကာင့္ဝီလ္ဟာ သူ႔ခ်စ္သူျဖစ္တဲ့အယ္ဗာကိုေရာဂါမကူးေအာင္ ႏွစ္ေယာက္လုံးလည္းအသက္ရွင္က်န္ရစ္ႏိုင္ေအာင္ စနစ္တက်စီမံၿပီး ေနထိုင္ပါေတာ့တယ္ ဝီလ္တို႔ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္အဆုံးထိေဘးကင္းကင္းနဲ႔ရွင္သန္သြားႏိုင္ပါ့မလား ဒီေရာဂါဆိုးႀကီးကိုေရာ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသသြားႏိုင္မလားဆိုတာကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Genre :Drama, Romance,Sci-fi Subtitle : ...
IMDB: 5.1/10 2,818 votes
The Superdeep (2021) ##unicode တစ်နေ့မှာ epidemiologistတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Annaဆီကို အာဏာပိုင်တွေက ဆက်သွယ်လာပြီးတော့ Kola superdeepက တွင်းနက်ကြီးမှာရှိတဲ့ စမ်းသပ်ခန်းကိုသွားဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့စမ်းသပ်ခန်းမှာ ထူးဆန်းတဲ့ကူးစက်ရောဂါဖြစ်လာပြီးတော့ လူတွေသေဆုံးခဲ့ရတာမို့လို့ WHOက စမ်းသပ်ခန်းကို ပိတ်ချဖို့ အတွက်အမိန့်ထုတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေက စမ်းသပ်ခန်းက တီထွင်မှုကို လက်နက်အဖြစ်အသုံးချချင်တဲ့အတွက် နမူနာပစ္စည်းရယူဖို့အတွက် Annaကိုစေလွှတ်ခဲ့တယ်။ Annaတို့ စမ်းသပ်ခန်းထဲရောက်သွားချိန်မှာ စမ်းသပ်ခန်းခေါင်းဆောင် Georgianကြောင့် ‌မြေအောက်စမ်းသပ်ခန်းမှာ ပိတ်မိနေခဲ့တယ်။စမ်းသပ်ခန်းကနေ ထွက်နိုင်ဖို့နည်းလမ်းရှာဖွေနေတုန်းမှာ လူတွေကို သေဆုံးစေတဲ့ကူးစက်ရောဂါက လူတွေကိုသေဆုံးစေရုံတင်မက ကြောက်စရာသတ္တဝါကြီးတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်စေတဲ့အကြောင်းကို Annaတစ်ယောက်သိသွားခဲ့တယ်။Annaတို့အဖွဲ့ အဲ့စမ်းသပ်ခန်းကနေ အသက်ရှင်လျက်လွှတ်‌‌မြောက်လာနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi တစ္ေန႔မွာ epidemiologistတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Annaဆီကို အာဏာပိုင္ေတြက ဆက္သြယ္လာၿပီးေတာ့ Kola superdeepက တြင္းနက္ႀကီးမွာရွိတဲ့ စမ္းသပ္ခန္းကိုသြားဖို႔အမိန႔္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲ့စမ္းသပ္ခန္းမွာ ထူးဆန္းတဲ့ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္လာၿပီးေတာ့ လူေတြေသဆုံးခဲ့ရတာမို႔လို႔ WHOက စမ္းသပ္ခန္းကို ပိတ္ခ်ဖို႔ အတြက္အမိန႔္ထုတ္ထားခဲ့တယ္။ဒါေပမဲ့႐ုရွားအာဏာပိုင္ေတြက စမ္းသပ္ခန္းက တီထြင္မႈကို လက္နက္အျဖစ္အသုံးခ်ခ်င္တဲ့အတြက္ နမူနာပစၥည္းရယူဖို႔အတြက္ Annaကိုေစလႊတ္ခဲ့တယ္။ Annaတို႔ စမ္းသပ္ခန္းထဲေရာက္သြားခ်ိန္မွာ စမ္းသပ္ခန္းေခါင္းေဆာင္ Georgianေၾကာင့္ ‌ေျမေအာက္စမ္းသပ္ခန္းမွာ ပိတ္မိေနခဲ့တယ္။စမ္းသပ္ခန္းကေန ထြက္ႏိုင္ဖို႔နည္းလမ္းရွာေဖြေနတုန္းမွာ လူေတြကို ေသဆုံးေစတဲ့ကူးစက္ေရာဂါက လူေတြကိုေသဆုံးေစ႐ုံတင္မက ေၾကာက္စရာသတၱဝါႀကီးေတြအျဖစ္ေျပာင္းလဲလိုက္ေစတဲ့အေၾကာင္းကို Annaတစ္ေယာက္သိသြားခဲ့တယ္။Annaတို႔အဖြဲ႕ အဲ့စမ္းသပ္ခန္းကေန အသက္ရွင္လ်က္လႊတ္‌‌ေျမာက္လာႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာကို ၾကည့္ရႈၾကပါအုံး။ Review – Myet Chel File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : ...
IMDB: 4.8/10 799 votes
Home Sweet Home (2021) ##unicode ဟောင်ကောင်မင်းသားကြီး Aaron Kwok ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက်သည်းဖိုဇာတ်ကားလေးတစ်ခုကို တင်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ ဇာတ်လမ်းအစမှာ လူတစ်ယောက်က ချမ်းသာတဲ့မိသားစုတစ်ခုရဲ့ အိမ်မြေအောက်ခန်းထဲမှာ နိုးလာခဲ့တယ်။ သူဘာကိုမှလည်း သေချာမမှတ်မိတော့ဘူး။ သူမောင်းတဲ့ကျောင်းကားက မတော်တဆဖြစ်ပြီး ကလေးတွေသေကုန်လို့ မိဘတွေက သူ့ကိုအသေရရ၊ အရှင်ရရလိုချင်နေမှန်းသိလိုက်ရတော့ ဒီအိမ်မှာပဲဆက်နေခွင့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီအိမ်မှာ လင်မယား ၂ ယောက်ရယ်၊ သမီးတစ်ယောက်၊ သားတစ်ယောက်ရယ်ရှိကြတယ်။ အိမ်သားတွေကလည်း သူ့ကိုမိသားစုဝင်တစ်ယောက်လို ဆက်ဆံပေးကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဒီမိသားစု ၄ ယောက်က ပုံမှန်မဟုတ်တာကို သူခံစားမိလာတယ်။ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူမှတ်ဉာဏ်တစ်စွန်းတစ်စလည်း ပြန်ပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့ သူဘာလို့ဒီအိမ်ကြီးထဲကိုရောက်နေရတာလဲ၊ ဒီမိသားစုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကရော ဘာတွေများလဲဆိုတာကို အဖြေရှာရင်းကြည့်ရှုကြရမယ့် ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ##zawgyi ေဟာင္ေကာင္မင္းသားႀကီး Aaron Kwok ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္သည္းဖိုဇာတ္ကားေလးတစ္ခုကို တင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။ ဇာတ္လမ္းအစမွာ လူတစ္ေယာက္က ခ်မ္းသာတဲ့မိသားစုတစ္ခုရဲ႕ အိမ္ေျမေအာက္ခန္းထဲမွာ ႏိုးလာခဲ့တယ္။ သူဘာကိုမွလည္း ေသခ်ာမမွတ္မိေတာ့ဘူး။ သူေမာင္းတဲ့ေက်ာင္းကားက မေတာ္တဆျဖစ္ၿပီး ကေလးေတြေသကုန္လို႔ မိဘေတြက သူ႔ကိုအေသရရ၊ အရွင္ရရလိုခ်င္ေနမွန္းသိလိုက္ရေတာ့ ဒီအိမ္မွာပဲဆက္ေနခြင့္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီအိမ္မွာ လင္မယား ၂ ေယာက္ရယ္၊ သမီးတစ္ေယာက္၊ သားတစ္ေယာက္ရယ္ရွိၾကတယ္။ အိမ္သားေတြကလည္း သူ႔ကိုမိသားစုဝင္တစ္ေယာက္လို ...
Bite (2015) ##unicode ဒီတစ်ခါတော့ Horror ကားလေးတစ်ကားတင်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ ကေစီဟာ ဂျရတ်ဆိုတဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ မကြာခင်လက်ထပ်တော့မှာဖြစ်လို့ လက်မထပ်ခင် သူ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခရစ်စတင်းနဲ့ ဂျေးလ်တို့နဲ့အတူ ကမ်းခြေတစ်ခုကို အပန်းဖြေခရီးထွက်ခဲ့တယ်။ သူတို့တွေဟာ လူသူအရောက်အပေါက်နည်းလှတဲ့ တောထဲကရေကန်တစ်ခုအကြေင်းသိပြီး အဲ့မှာရေသွားကူးကြတယ်။ ရေကူးနေကြတုန်း ကေစီကို ရေထဲကအကောင်တစ်ကောင်ကကိုက်လိုက်တယ်။ ကိုက်ရာသေးသေးလေးဆိုတော့ သူတို့လည်းအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေလိုက်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့သူတို့ခရီးကပြန်ရောက်လာတဲ့အခါ ကေစီရဲ့အကိုက်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာက ဆိုးသထက်ဆိုးလာပြီး စိတ်တွေပါဂယောာင်ခြောက်ခြားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ အမှတ်တမဲ့ရလိုက်တဲ့ ကိုက်ရာလေးက ဘယ်လိုကြမ္မာဆိုးတွေကို ခေါ်ဆောင်လာမလဲဆိုတာ ဇာတ်ကားထဲမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြရအောင် ##zawgyi ဒီတစ္ခါေတာ့ Horror ကားေလးတစ္ကားတင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။ ေကစီဟာ ဂ်ရတ္ဆိုတဲ့ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္နဲ႔ မၾကာခင္လက္ထပ္ေတာ့မွာျဖစ္လို႔ လက္မထပ္ခင္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ခရစ္စတင္းနဲ႔ ေဂ်းလ္တို႔နဲ႔အတူ ကမ္းေျခတစ္ခုကို အပန္းေျဖခရီးထြက္ခဲ့တယ္။ သူတို႔ေတြဟာ လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းလွတဲ့ ေတာထဲကေရကန္တစ္ခုအေၾကင္းသိၿပီး အဲ့မွာေရသြားကူးၾကတယ္။ ေရကူးေနၾကတုန္း ေကစီကို ေရထဲကအေကာင္တစ္ေကာင္ကကိုက္လိုက္တယ္။ ကိုက္ရာေသးေသးေလးဆိုေတာ့ သူတို႔လည္းအမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ေနလိုက္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔သူတို႔ခရီးကျပန္ေရာက္လာတဲ့အခါ ေကစီရဲ႕အကိုက္ခံထားရတဲ့ဒဏ္ရာက ဆိုးသထက္ဆိုးလာၿပီး စိတ္ေတြပါဂေယာာင္ေျခာက္ျခားျဖစ္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ အမွတ္တမဲ့ရလိုက္တဲ့ ကိုက္ရာေလးက ဘယ္လိုၾကမၼာဆိုးေတြကို ေခၚေဆာင္လာမလဲဆိုတာ ဇာတ္ကားထဲမွာ ဆက္လက္ႀကည့္ရႈႀကရေအာင္ Review – Yue Liang File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Genre : ...
IMDB: 4.9/10 4,563 votes
Chernobyl: Abyss (2021) ##unicode 2021 ဧပြီလမှာ ထွက်ရှိထားတဲ့ ရုရှားဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ အဲလက်စ်က သူနေထိုင်ရာမြို့ရဲ့ နယူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုမှာ မီးသတ်သမားအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ ဆံပင်သွားညှပ်ရင်း လွန်ခဲ့တဲ့၁၀နှစ်ကကွဲကွာသွားခဲ့တဲ့ ငယ်ချစ်အိုလ်ဂါနဲ့ပြန်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အိုလ်ဂါမှာကတော့ ၁၀နှစ်အရွယ်သားလေးတစ်ယောက်ရှိပြီး သားလေးရဲ့နာမည်ကလဲအဲလက်စ်ပါ။ တစ်နေ့တော့ ဓာတ်ပေါင်းဖိုပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မြို့ကလူတွေဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်ခံရပြီး မြို့ကိုစွန့်ခွာဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဓာတ်ပေါင်းဖိုထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေကို မဖယ်ထုတ်နိုင်ရင် ဥရောပတစ်တိုက်လုံးပါ ပျက်စီးရတော့မယ့်အခြေအနေမှာ ဓာတ်ပေါင်းဖိုရဲ့တည်ဆောက်မှုပုံစံကို ကောင်းကောင်းသိတဲ့ အဲလက်စ်တစ်ယောက်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။ ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်ခံရပြီး ပျက်စီးကြတော့မယ့် အရေးကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာပါ။ ##zawgyi 2021 ဧၿပီလမွာ ထြက္ရွိထားတဲ့ ႐ုရွားဇာတ္ကားေကာင္း တစ္ကားပါ။ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ အဲလက္စ္က သူေနထိုင္ရာၿမိဳ႕ရဲ႕ နယူကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖိုမွာ မီးသတ္သမားအလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ေတာ့ ဆံပင္သြားညႇပ္ရင္း လြန္ခဲ့တဲ့၁၀ႏွစ္ကကြဲကြာသြားခဲ့တဲ့ ငယ္ခ်စ္အိုလ္ဂါနဲ႔ျပန္ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ အိုလ္ဂါမွာကေတာ့ ၁၀ႏွစ္အ႐ြယ္သားေလးတစ္ေယာက္ရွိၿပီး သားေလးရဲ႕နာမည္ကလဲအဲလက္စ္ပါ။ တစ္ေန႔ေတာ့ ဓာတ္ေပါင္းဖိုေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ကလူေတြဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္ခံရၿပီး ၿမိဳ႕ကိုစြန႔္ခြာဖို႔ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ ဓာတ္ေပါင္းဖိုထဲမွာရွိတဲ့ေရေတြကို မဖယ္ထုတ္ႏိုင္ရင္ ဥေရာပတစ္တိုက္လုံးပါ ပ်က္စီးရေတာ့မယ့္အေျခအေနမွာ ဓာတ္ေပါင္းဖိုရဲ႕တည္ေဆာက္မႈပုံစံကို ေကာင္းေကာင္းသိတဲ့ အဲလက္စ္တစ္ေယာက္ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ။ ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္ခံရၿပီး ပ်က္စီးၾကေတာ့မယ့္ အေရးကေန လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမွာပါ။ Review – Hein Htet Aung File Size – 2GB,1GB Format…mp4 Quality ...
IMDB: 4.4/10 213 votes